यस्ता छन् बिजुलीभित्रका अदृश्य खेल
विकास थापा सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 4281 पटक पढिएको
अध्ययन भइरहेको आयोजनामा भाँजो हाल्ने र बिनाप्रतिस्पर्धा भइरहेको राजस्व लुटमा किन मौन रहन्छ अख्तियारनेपालीले जलविद्युत् बनाएको सय वर्ष कटिसकेको छ । यस अवधिमा एक हजार मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन भएको छैन । अझ ८३ हजार र ४३ हजार मेगावाटको रटान र व्यवहारमा लागू नगरिने योजना प्रतिवेदनमा दोहोरिँदै आएका छन् ।
अझै पनि हाम्रा नेताहरू विशेष गरेर ऊर्जा मन्त्रालय हाँक्न आउने मन्त्री र स्थायी सरकार मानिने मन्त्रालयका कर्मचारीको रुढीवादी सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली उत्पादन गर्न दिने नीति लागू भएको २६ वर्ष बितिसकेको छ । यो नीति पूर्णरूपमा असफल भइसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा भने अझै पनि भ्रम छ—जलविद्युत् भनेको निजी क्षेत्रले बनाउने विषय हो ।
जलविद्युत् नीति लागू भएको तीनदशक पुग्न लागिसक्दा पनि त्यसलाई परिवर्तन गरेका छैनौं । यो नीति परिवर्तन गर्नु भनेको ऊर्जा क्षेत्र हाँक्न आउनेहरूका लागि खाइखेली गर्ने ठाउँ बन्द गर्नु हो । त्यसैले परम्परागत ढर्राबाट मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र चलाइएको छ, फलस्वरूप हामी अन्त्यहीन लोडसेडिङमा जकडिएका छौं । जबकि लोडसेडिङ आगामी यति वर्षसम्म कायम हुन्छ भन्ने २०५२ साल अर्थात् अरुण तेस्रोको अवसान हुँदादेखि वा भनौं त्योभन्दा अघि नै थाहा थियो । तर त्यसअनुसारको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीति नै बन्न सकेन ।
निजीक्षेत्रको मात्र भर पर्दा लोडसेडिङ हुने रहेछ भन्ने बुद्धत्व नीतिनिर्माताले प्राप्त नगरेका होइनन्, तर उनीहरूकै स्वार्थका कारण नीतिगत सुधार र परिवर्तन भने हुन सकेन । नीतिले लाइसेन्सराज र लाइसेन्स किनबेचलाई प्र श्रय दियो । सुरुका दिनमा कुरा नबुझेकाहरूले यो क्षेत्रमा चासो देखाएनन्।
जबकि खिम्ती, भोटेकोसी, इन्द्रावती तेस्रो र चिलिमेको उदयपछि लाइसेन्सराजले महत्व पाउन थाल्यो, अनि सुरु भयो झोलामा खोला । आयोजनाको वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बनाएर बिजुली उत्पादन गर्नेले उल्टै प्र श्रय पाए । यसरी बढाइएको कृत्रिम लागतमा समायोजित हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न थाल्यो, जसले गर्दा खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, मिस्ट्रीखोला जस्ता आयोजना नजिरका रूपमा स्थापित भए ।
जसरी हुन्छ बिजुलीमाथिको परनिर्भरता कायमै राख्ने, रणनीतिक महत्व र आवश्यकता भएका आयोजनामा हात हाल्नै नदिने र हातमा आएका पनि अनेक प्रपञ्च गरी विदेशीलाई बेच्ने अघोषित नीतिका कारण जलविद्युत् विकास केवल दलहरूका चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र सीमित भएको छ ।
शक्ति र प्रभाव हुनेले जस्तोसुकै पीपीए गराउन सक्छ भन्ने दृष्टान्त नै बन्यो । अझ स्वदेशका दलालहरूले लाइसेन्स हात पारी विदेशीलाई दिने परम्परा पनि सुरु भयो । जसको पछिल्लो उदाहरण माथिल्लो त्रिशूली—१ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीलाई लिन सकिन्छ । सस्तो आयोजना महँगो बनाई डलरमा पीपीए गर्ने ‘चलन’ आयो । जतिसक्दो कमिसन दिन सक्यो उति नै बढी आकर्षक पीपीए र यसका दर तय हुन थाले । अन्ततः प्राधिकरण अर्थात् राज्यको एकमात्र विद्युत् खरिद गर्ने, आयोजना बनाउने, वितरण र प्रसारण गर्ने कानुनी मान्यता पाएको संस्था धराशायी बन्न पुग्यो । जहाँ प्राधिकरण आयोजनाविहीनजस्तै भयो र लोडसेडिङको दुर्दशा सुरु भयो ।
समग्रमा यसरी बेथिति भित्रिएर लोडसेडिङले स्थायी रूप धारण गरेको छ । जहाँ बिजुली जस्तो अत्यावश्यक वस्तु पनि भारतसित आयात गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि वर्षको १८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपरेको छ । यो क्रमको निरन्तरता कतिन्जेल भन्ने टुंगो छैन । यसप्रति विशेष गरेर जिम्मेवार दल र कर्मचारीतन्त्र गम्भीर देखिएनन् । गम्भीर नहुनुको एउटै कारण हो—लाइसेन्सराज र त्यसमा निहित अकुत कमिसन।
दस वर्षअघि नेपालको कुल बजेट दुई खर्ब ८६ अर्ब थियो । अहिले करिब १२ अर्ब छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीको मानसिकता भने भिखारीकोजस्तो छ । अर्थात् उनीहरू स्वदेशी पुँजीबाट केही यत्न गरौं, प्रयास गरौं, कोसिस गरेर त हेरौं भन्नेमा समेत छैनन् । अबको आवश्यकता हो जलासययुक्त विद्युत्को । यसका लागि राज्यकै लगानी चाहिन्छ भन्नेमा उनीहरू प्रस्ट छन् । तर नियतवश जलासययुक्तमा पनि निजी क्षेत्रलाई जबर्जस्ती प्रवेश गराउने आँट गर्नुको पछाडि उही कमिसन लुकेको कसैबाट छिपेको छैन ।
यही कसीमा माओवादीले मात्र दुई, दुईवटा ठूला जलासययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्यो । खोलानाला बेचबिखनलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने एमाले र माओवादी आफैं संलग्न हुँदै आएका छन् । अझ कांग्रेसले कर्णाली चिसापानी समेत एनरोनलाई बेच्न तम्सेको थियो । राप्रपा, कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारले २०५४ सालमा पश्चिम सेती बेचेकै थिए । उनीहरूको ‘लिगेसी’ मा अहिले आएर माओवादीसमेत ‘जे छ यसैमा रहेछ’ भन्दै खोलानाला बेचबिखनमा सरिक बन्यो ।
माओवादीकै नेतृत्वमा देशको रणनीतिक महत्वका तीन ठूला आयोजना पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो बेचियो । सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भई खन्न थाले हुने पश्चिम सेती किन अडयो ? किनभने यसमा बनाउने नियत नै थिएन । यो प्रकरणमा सबै दल एकमत भए । बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो बिनाप्रतिस्पर्धा दिइँदा राज्यले अर्बैाँ रुपैयाँ गुमायो । जलविद्युत्को लाइसेन्स बेचबिखन सरकारबाटै सुरु भएको हो ।
सन् २०१० मा सुपर सिक्स नाम दिएर राज्यले अध्ययन गरेको ६ वटा आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराइयो । यसबाट राज्यले कम्तीमा २८ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र हात पार्‍यो । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा भयो । यी आयोजना बनेमा राज्यले अर्बैाँ रुपैयाँ पाउने ग्यारेन्टी छ । तर तामाकोसी तेस्रो र बूढीगण्डकीमा राज्यले के पायो ? उल्टै गुमायो ।
प्रतिस्पर्धा गरेको भए बूढीगण्डीकीको लागत कम्तीमा २० प्रतिशतले कम हुन जान्थ्यो । यो भनेको कुल दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकी प्रतिस्पर्धा गराएको भए यसको कुल ठेक्का ५२ अर्ब रुपैयाँले कम हुन गई दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत कायम हुन जान्थ्यो । यसबाट राज्यलाई सीधै ५२ अर्ब रुपैयाँ घाटा अर्थात् थप व्ययभार पर्न गयो ।
त्यस्तै तामाकोसी तेस्रोमा पनि प्रतिस्पर्धा गराएको भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनी नर्वेको एसएन पावरले गरेको खर्च एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ राज्यको कोषमा प्राप्त हुन्थ्यो । अझ त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा त्योभन्दा पनि बढी रकम राज्यले प्राप्त गर्न सक्थ्यो । त्यो रकम प्रवद्र्धकले गोजीमा हाल्ने अवसर मिल्यो । यसरी तामाकोसी तेस्रोमा सीधै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । तर अहिले व्याख्या के गरिँदैछ भने तामाकोसी तेस्रो आयोजना त्यति आकर्षक होइन, ६५० मेगावाट पनि बिजुली उत्पादन गर्दैन, यसको खास साइज तीनसय मेगावाट जति हुन आउँछ ।
यस्तो भन्ने हो भने यसको लाइसेन्स ६५० मेगावाटमा किन जारी गरिएको ? जबकि नर्वेको एसएन पावरजस्तो विद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको कम्पनीले गरेको अध्ययनलाई अपूर्ण भन्न सकिँदैन । किनभने उसले भारत वा नेपालमा बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको भए लगानी गरेर निर्माण गरिछाड्थ्यो । यति गरेर पनि अहिले जसलाई बेचबिखन गरिएको छ, तिनले बनाउने लक्षण देखिएको छैन ।
निजी क्षेत्रले संसारमा जलासययुक्त आयोजना बनाएको इतिहास छैन । पिकिङसम्मका केही आयोजना बनेका छन् । जलासययुक्त आयोजना नबनेसम्म हाम्रो भारतीय बिजुली निर्भरता बढ्दै जानेछ । अझैं पनि देशका प्रमुख सहरबाहेक अन्यत्र लोडसेडिङ कायमै छ । मुलुकबाटै अन्त्य भइसकेको होइन, त्यसमाथि भारतीय बिजुलीको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा छ । जलासययुक्त आयोजनामा निहित जोखिम र पर्यावरणीय सुरक्षाका कारण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यो नेपालको मात्र होइन, विदेशीले समेत सक्दैन । संसारभर राज्यले नै जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरेको अभ्यास छ । नेपालमा भने यसको ठीक उल्टो छ ।
जलासययुक्त आयोजना, त्यो पनि पूर्ण अध्ययन भइसकेका र आझैले निर्माण गर्न तय गरिएका, धमाधम बेचिँदै छन्, प्रतिस्पर्धा गराएको भए पनि एउटा कुरा । तर राज्यका प्रचलित नीति र ऐन नियमहरूको धज्जी उडाइँदासमेत सबै तैं चुप र मै चूप छन् । अब अध्ययन पूरा हुन लागेको अर्को रणनीतिक महत्वको आयोजना छ—नलसिंहगाड । यसलाई पनि सके अध्ययन नै हुन नदिने, कदाचित अध्ययन पूरा भएछ भने पनि विदेशीको हातमा पार्ने चलखेल अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरुमा अनुसन्धान गरी ‘क्लिन चिट’ दिइसकेपछि पुनः मुद्दा दायर गर्नुको पछाडि केही रहस्य अवश्य छन् । अध्ययन भइरहेकोमा भाँजो हाल्ने, तर बिनाप्रतिस्पर्धा राजस्व लुटमा पनि अख्तियार मौन छ ।
तामाकोसी तेस्रो र बूढीगण्डकीमा अख्तियारको मौनता बुझिनसक्नुको छ । सम्भवतः अख्तियारकै पूर्व ‘सहमति’ लिएर बेचबिखन गरिएको पो हो कि भन्ने आशंकालाई उसको मौनताले थप मलजल गरेको छ । विडम्बना, विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् राज्यले बूढीगण्डकीभन्दा सस्तो र छिटो बन्ने तमोर आयोजनाको अध्ययन गर्छु भन्दा लाइसेन्स पाएको छैन । यसरी नेपालमा जसरी हुन्छ बिजुलीमाथिको परनिर्भरता कायमै राख्ने, राज्यले यस्ता रणनीतिक महत्व र आवश्यकता भएका आयोजनामा हात हाल्नै नदिने र हातमा आएका पनि अनेक प्रपञ्च गरी विदेशीलाई बेच्ने अघोषित नीति (जुनसुकै सरकार आए पनि) का कारण जलविद्युत् विकास केवल दलहरूका चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र सीमित भएको छ ।
अहिले केही दिनका लागि ऊर्जामन्त्री बनेका कमल थापाले चाहेर पनि मन्त्रालयमा र नीतिगत तवरमा केही सुधार गर्न सक्दैनन्, किनभने अझै पनि मन्त्रालय माओवादीबाटै नियन्त्रित, निर्देशित र सञ्चालित छ । कर्मचारी संयन्त्रले ‘मालिक’ को मात्रै आज्ञापालन गर्ने, भक्तिभाव देखाउने भएकाले मन्त्री फेरिएपछि यो संयन्त्र पनि फेरिनुपर्ने अवस्था त्यसै सिर्जना भएको होइन रहेछ । राज्यको आवश्यकता एकातिर छ, काम कारबाही अर्कोतिर भइरहेको छ । राज्यको आवश्यकतामै केन्द्रित हुने हो भने नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउन उत्तिकै जरुरी छ । होइन भने जुनसुकै दलका सरकार आओस् केबल काम एउटै हुन्छ-लाइसेन्स बेचबिखन ।
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6600
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13415
पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार 2366
कांग्रेसले गठबन्धन अझै कस्ने 9249
तीन वरिष्ठ सह-सचिव सचिवमा बढुवा 7544
कम्युनिस्टहरूको प्रणाली परिवर्तन 998
चुनावदेखि सावधान 923
चीनसँगको एउटा मात्र नाका चार दिन बन्द 1235
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 6082
सडकमा भेटिएको बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो 893
निर्वाचन विरोधी एक शिक्षक पक्राउ 1056
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2704
चरिकोटमा भेटिएको बम सेनाद्वारा निष्क्रिय 1260
भाइबर र ह्वाट्स एपमार्फत ठगी बढ्यो 5701